ỤMỤ AFỌ IGBO ACHỌỌLA NKWADO MAKA IGBASA OZIOMA ỤKA ALAKỤBA – hoo!haa!!
ỤMỤ AFỌ IGBO ACHỌỌLA NKWADO MAKA IGBASA OZIOMA ỤKA ALAKỤBA
“Ọdị ezigbo mkpa na ndi Awụsa na ndi Yoruba matara na enwere ụmụ afọ Igbo ndi bụkwa ezigbo ndi okpukpere chi Alakụba, na-agbanyeghị na ha pere mpe n’ọnụ ọgụgụ. O kwesịrị ka enye ha ezigbo nkwado”
Nke a bụ ọnụ mmiri okwu onye isi oche ndi otu na-ahụ maka njem nsọ ndi Alakụba na steeti Ebọnyị, bụ Alaaji Abas Egwu, n’Abakeleke.
Egwu kwuru nke a mgbe ọ na-anabata ode akwụkwọ ukwu otu ụka Alakụba akpọrọ Ansar-Ud-Deen Society nke Naijiria, (ADS), bụ Alaaji Ibrahim Kilani, mgbe ọ bịara njem nleta nke ndi otu ADS na steeti ahụ.
N’okwu ya nwa afọ Igbo ahụ bụ Alaaji Egwu kwuru na ọ dị mkpa ka ndi Alakụba mpaghara ala anyị ndi ọzọ, gbata nye aka n’ihụ na ewugasịrị ọtụtụ ụlọ akwụkwọ nakwa ụlọ okpukpere ndi Alakụba n’akụkụ ọwụwa anyanwụ maka inye aka na-igbasa ozi ọma Alakụba na mpaghara ahụ.
O kwuputara ịkwụba-aka-ọtọ nke gọọmenti Ebọnyị n’ebe okpukpere Alakụba na ndi okpukpere ya nọ. Ọ sịrị n’ọbụ naanị n’Ebọnyị na n’ime mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ steeti nwere bọd na-ahụ maka njem nsọ kwụrụ onwe ya nke ndi ụka Kraist enweghị ọnụ okwu banyere ha.
N’okwu nke ya, Alaaji Kilani sịrị na ya bịara Ebọnyị ka ya na ndi otu ADS nke steeti ahụ tikọọ isi ọnụ ma leba anya n’uru di iche iche nke ndi otu ahụ nwere.
Alaaji Kilani, onye bụbu onye isi oche otu njem nsọ ndi Alakụba na steeti Edo nakwa onye otu ndi na-ahụ maka njem nso Alakụba ala anyị niile, kelere gọọmenti steeti Ebọnyị ka o si elezi ndi njem nsọ anya nakwa ka o si gụnye ndi Awụsa na ndi Yoruba na otu bọd njem ndi nsọ steeti ahụ.
Onye ndu ndi ụka Alakụba na steeti Ebọnyị, ma bụrụkwa osote onye isi otu Alakụba akpọrọ Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, (NSCIA), bụ Dọkinta Harun Aja kọwara otu ADS dika otu ejizighị eti epele na steeti Ebọnyị.
Oji ohere ahụ too ndi otu Dangote maka onyinye ha nyere ndi Alakụba na steeti Ebọnyị mgbe ha mere emume ebum ọnụ nke gara aga.
Eze ndi Awụsa na steeti Ebọnyị bụ Alaaji Danjomo Gambo kelere otu ADS maka mbọ ha na-agba na steeti Ebọnyị mgbe Alaaji Kilani jere kpọtụrụ ya.
Previous Post: EGWU DỊKWA NA STEETI IMO!
Next Post: ARỤ NA-EME, LEKWANỤ ONYE CHỌRỌ ILI NNE YA NA NDỤ!!!